Igwe mmiri mmiri bụ akụkụ nke mechanics na mechanics nke mgbasa ozi na-aga n'ihu nke bụ isi nkuzi na ọzụzụ injinia. Ihe nkuzi anyị na-enye bụ mmeghe nke sistemu mmiri, a na-akụzi ya dịka akụkụ nke ọzụzụ izugbe nke ụmụ akwụkwọ injinia, ọ nwekwara ike ịba uru nke ukwuu maka ụmụ akwụkwọ mahadum ma ọ bụ ndị nkuzi onwe ha.
Banyere ihe ndabere nke sistemu mmiri mmiri, anyị ga-ekwusi ike nke ukwuu na iwu nke ntọala nha nhata nke eruba n'ụzọ doro anya na-eji ụkpụrụ nke mekaniki na physics agbakwunyere site hypotheses nke anụ ahụ si malite na ọdịdị nke mmiri na eruba.
Anyị ga-elekwasị anya pụtara anụ ahụ nha nhata na anyị ga-ahụ otú e si eji ha na ihe ikpe. Nke ngwa Igwe mmiri mmiri dị ọtụtụ na ụgbọ ala, ụgbọ elu, injinia obodo, injinịa kemịkalụ, hydraulics, atụmatụ iji ala, ọgwụ, wdg.
Maka ụzọ izizi a maka sistemu mmiri mmiri anyị ga-amachi usoro ahụ na mmiri mmiri na-adịghị ike na-adịgide adịgide ma ọ bụ na ọ bụghị. A ga-ewere mmiri ndị ahụ dị ka mgbasa ozi na-aga n'ihu. Anyị ga-akpọ urughuru, ihe mmewere nke obere olu na-enweghị ngwụcha maka nkọwa mgbakọ na mwepụ mana buru ibu n'ihe metụtara ụmụ irighiri ihe a ga-akọwa ya site na ọrụ na-aga n'ihu.
Okwu mmalite maka igwe mmiri mmiri Ọnwa Iri na Abụọ 18, 2021Tranquillus
GỤỌ IHE: Facebook pixel nwụnye
gara agaIbi na ịnweta ọrụ na France
-esonụỌgụgụ isi… na ọgụgụ isi!